Global Voices teny Malagasy » Mibilaogy miafina anarana amin’ny WordPress & Tor nohavaozina! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Mey 2019 4:24 GMT 1	 · Mpanoratra Sami Ben Gharbia Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Mediam-bahoaka, Solovava, Torolalana, GV Mpisolovava
Faly aho manambara fa efa hita amin'ny aterineto ny torolalana mibilaogy miafina anarana miaraka amin'ny WordPress & Tor ! Nosoratan'i Ethan Zuckerman tamin'ny 13 Aprily 2005 ny drafitra voalohany tamin'izany torolalana izany ary nohavaozina tamin'ny 1 Oktobra 2006. Tamin'ny 8 Aogositra 2007, namoaka endrika HTML nohavaozina tamin'ny torolalana ny Global Voices Advocacy, miaraka amin'ny endrika PDF azo trohana.
Mba hanomezana anao vaovao farany indrindra mikasika ny fomba fibilaogina miafina anarana, dia nohavaozina indray ny torolalana mba hifanaraka amin'ny Tor nohavaozina vao haingana  ny toro-hevitra rehetra.
Mampahafantatra ny Tor Browser Bundle , endrika tovozina malalaka amin'ny fitety (browser) entin-tanana novolavolain'ny Tetikasa Tor ity fanavaozana ity, izay ahafahanao mampiasa ny Tor amin'ny tsy fametrahana na inona na inona (zero install). Ny Tor Browser dia kojakoja Tor novolavolaina mialoha miaraka amin'ny fitety Mozilla Firefox mipetraka ho azy ho an'ny USB na media fitondra hafa (SD Card, Hard Drives, Compact Flash Card).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/12/138518/
 torolalana mibilaogy miafina anarana miaraka amin'ny WordPress & Tor: https://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/
 Tor nohavaozina vao haingana: https://blog.torproject.org/blog
 trohy : https://advox.globalvoices.org/wp-content/uploads/2009/10/blog_anonimo.pdf